Faah faahin:-Shil sababay Dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay Puntland | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Faah faahin:-Shil sababay Dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay Puntland
Faah faahin:-Shil sababay Dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay Puntland
Shil gaari oo geystay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa xalay ka dhacay duleedka Magaalada Garoowe ee Caasimadda maamulka Puntland, waxaana laga helayaa faah faahino dheeraad ah.
Shilkaan ayaa waxaa uu yimid, ka gadaal markii gaari nooca dadweynaha raacaan ee loo yaqaano BL-da uu rogmaday, xili uu marayay goob laga wareejiyay Kantaroolka Galbeed ee Garoowe.
Inta la xaqiijiyay hal qof oo dumar ah ayaa ku geeriyootay shilkaas dhacay, isla markaana waxaa ku dhaawacmay 5 qof oo kamid ah 10 ruux oo la socday gaariga shilka galay oo ka yimid dhinaca degaanka Laacdheere.
Dad goob ka agdhawaa ayaa gurmad xoogan u sameeyay dadkii waxyeelada soo gaartay, kuwaasi oo si deg deg ah loo gaarsiisay Isbitaalka weyn ee Garoowe, waxaana qof kamid ah dadkii dhaawacmay xaaladiisa tahay mid liidato.
Wararka ayaa intaas waxaa ay kusii darayaan in darawalkii waday gaariga shilka galay uu goobta ka cararay, waxaana la tilmaamay in Booliska baadi goob ay sameeyeen lagu soo qabtay darawalkii waday gaariga.
Deegaano iyo degmooyin ka tirsan Maamulka Puntland ayaa waxaa dhowr jeer ka dhacay shilal kala duwan oo geystay khasaaro dhimasho iyo dhaawac, waxaana ugu dambeysay shil gaari oo jimcihii ka dhacay degaan hoostega Gobolka Sool
Maqaal horeWasiir ka tirsan Galmudug oo xilka qaadis lagu sameeyay iyo sababta keentay
Maqaal XigaSomaliland oo loogu deeqay Qalab loo adeegsado hubinta Codbixiyaha